Naqshadeynta buluugga buluugga ah ee buluugga ah - HF29028
Waxaa laga sameeyay jilicsan, 100% microfiber jilicsan oo leh suuf khafiif ah laakiin cufan, sariirta gogoshaani waa iftiin ku filan in loo isticmaalo cimilada diiran laakiin sidoo kale waxay u adkeysataa midkeeda habeen qabow. Waa Mashiinka lagu dhaqi karo biyo qabow. Ku qalal kuleylka yar. Waxaa loo dhisay si aad u dheer haddii si sax ah loo ilaaliyo. wasakhda iska caabinta dharka iyo timaha xayawaanku kuma dhegi doonaan. Waxyaabaha tayada sare leh waa xoqitaan waxayna u adkaysi u leeyihiin.